Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Oo Kulan Isugu Yeedhay ErgooyinKa Nabadaynta Ceel-Afweyn | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Oo Kulan Isugu Yeedhay ErgooyinKa Nabadaynta Ceel-Afweyn
Published on July 12, 2018 by sdwo · No Comments
Ceel-Afwayn (SDWO): Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) iyo wafdigii ballaadhnaa ee uu hoggaaminaayay ayaa galabta kulan isugu yeedhay dhamaan ergooyinkii ka qayb gelayay nabadaynta deegaanka Ceel-afweyn.
Shirkaas oo ay kasoo qayb galeen salaadiinta ka kala socday dhamaan gobolada Somaliland, culimada caanka ah ee Somaliland iyo wafdiga madaxweyne ku-xigeenka oo ka koobnaa Wasiirka arrimaha guddaha,iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo guddomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID.
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa sheegay in ujeedada kulankani yahay sidii loo qaabayn lahaa wada xaajoodka lala gali doono labada dhinac ee dirirtu dhex martay.
Waxaanu Madaxweyne ku-xigeenku sheegay in xukuumadda ay ka go’an tahay in mudo kooban lagu soo af-jaro xaaladda ka taagan deegaamadaasi.
Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir oo ku hadlay afka ergooyinka ayaa sheegay sida ay muhiimka u tahay hawsha ay wafdigani u socoto, isla markaana waxa uu aad ugu dheeraaday dadaalo xoogan oo ay sameeyeen mudadii ay joogeen Ceel-afweyn.
Isagoo niyad wanaagsan ka muujiyay xaaladda Ceel-afweyn oo uu sheegay in ay meel wanaagsan wax u marayaan ilia hadda oo ay ku sugan yihiin halkaasi.